थाइल्याण्डमा मस्ति गर्दै दिवाकर र दीपिका ! • Gazzabko Online
थाइल्याण्डमा मस्ति गर्दै दिवाकर र दीपिका !
Gazzabkoonline || November 1, 2018 at 2:08 pm
निर्देशक दिवाकर भट्टराई र दीपिका पादुकोण छुट्टी मनाउन थाइल्याण्ड पुगेका छन् । केहि दिन अघि मात्रै आफुहरु विवाह बन्धनमा बाँधिएको कुरा फेसबूक मार्फत सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले सबैलाई चकित पारेका थिए । त्यसपछि नै उनीहरु मिडियादेखि टाढा रहेका छन् । हाल उनीहरु थाइल्याण्डमा मस्ति गरिरहेका छन् । उहालै उनीहरुले इंन्टग्राममा केहि तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा एकआपसमा चुम्बन गरेका दृश्यहरु छन् ।
दिवाकर र दीपिका दुबैले ‘ऐश्वर्य’बाट डेब्यु गरेका थिए । दिवाकरले निर्देशनमा र दीपिकाले नायिकाको रुपमा डेब्यु गरेका थिए । हाल दीपिका अभिनित फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ ले बम्पर कलेक्शन गरिरहेको छ भने निर्देशक दिवाकर अनमोल केसी अभिनित फिल्म ‘क्याप्टेन’ को सम्पादनमा ब्यस्त छन् । अनमोलको ‘क्याप्टेन’ लाई पनि निर्देशक दिवाकरले नै निर्देशन गरेका छन् । साथै ‘क्याप्टेन’ को कथा पनि उनैले लेखेका छन् ।